လှစ်ကနဲ .. တွေ့လိုက်မိသလိုပါပဲ
နောက်ကလိုက်ကြည့်တော့ ပျောက်သွား ပြီ...
သဲသောင်ခုံ မွမွ ပေါ်မှာတော့
လွမ်းစရာ့ သူ့ ခြေရာတွေ ထင်လျှက်ကျန်နေ..
မွှေးတဲ့ အကြောင်းပြောဖို့ ..
စဉ်းစား ရမယ်လို့ ထင်နေသူကလေး..
တိမ်ပြာပြာတွေ နှစ်သက်တာ ..
နှစ်သက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြ ဖို့
ခဲခဲယဉ်းယဉ်း လို့ ထင်နေသူကလေး..
ချစ်သူ့ လက်ကလေး.. ဆွဲယူ ထွေးပွေ့ ဖို့အရေး
ဘာတွေကြောင့် ဘယ်လို တုန့်နှေး..
အဝေး ကို ထွက် ထွက် ပြေးရတာလဲ..
အကြို အကြား အနောက်ဖက်ဆီက
အပြာရောင် အရိပ်ကလေး ရေ...
မင်း မျက်နှာ မမြင်ရအောင်..
မင့် အသက်ရှူသံ သဲ့သဲ့ က တော့
မင့် ချစ်သူ့ ရင်... လာ လာမှန် တယ် ရှင်.... ။
Posted by မမသီရိ at 12/30/2010 07:24:00 PM
ကောင်းကင်ကြီးရဲ့ အောက်မှာ ..
တောင်စဉ် ညိုပြာပြာတွေ ရှိတယ် ..
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း အကြားမှာ ပင်လယ်တစင်း ရှိတယ် ..
အဲဒီ ပင်လယ်ရဲ့ ဘေးအစွန်းနားမှာ
အနောက်ဖက်ကမ်းခြေ ရှိတယ် ..
အနောက်ဖက်ကမ်းခြေ အလွန်မှာ ..
ချစ်သူ့ မြို့ကလေး ရှိတယ် ..
အဲဒီ မြို့ကလေး အစွန်မှာ ..
တောင်ကုန်းကလေး တခု ရှိတယ်
ပန်းခြံကလေး တခု ရှိတယ်..
ပန်းခြံကလေး မနီး မဝေးမှာ..
ရေကန်ကလေး တခု ရှိတယ်..
အဲဒီရေကန် လေး အဆုံးမှာ
လမ်းသွယ်ကလေး တခု ရှိတယ်
ချစ်သူ့ ကားကလေး ရှိတယ်..
Music Player ကလေး တလုံးရှိတယ်..
အဲဒီ Music Player ကလေးထဲမှာ
အဲဒီကဗျာတွေ ထဲမှာ ..
ကဗျာ ဆရာ ရဲ့ ချစ်သူ ရှိတယ်..
အဲဒီ အမျိုးသမီးကလေးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ..
သူ့ ချစ်သူ အမျိုးသား တယောက် ပဲ ရှိတယ်..
အဲဒီ အမျိုးသား ကလေး ရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့
ဘယ်သူ ရှိသလဲ ဘယ်သူ မှ မသိနိုင်တယ်....။
Posted by မမသီရိ at 12/23/2010 06:57:00 PM
နွေးထွေးမယ်မှန်း အသေအချာ သိနေတဲ့
အဲဒီ လက်ကလေး တစုံ..
ကျမအတွက် ပန်းတွေ.. သူ..
အဲဒီ လက်ကလေး နဲ့..
ကျမအတွက် လမ်းတွေ .. သူ..
အဲဒီလက်ကလေး နဲ့ ..
ကျမ အတွက် သီချင်းတွေ .. သူ..
ကဗျာတွေစီရင်း လမ်းလျှောက်နေတတ်သူကလေး ရဲ့
နွေးထွေးမယ်မှန်း အသေအချာ သိနေလို့..
တနေ့နေ့တော့.. ကျမ ပါးပြင်.. ဆွဲယူ ကပ်ထား ချင်သေးတယ်..။
Posted by မမသီရိ at 12/16/2010 08:40:00 AM
လင်းချင်တိုင်း လင်းနေတဲ့ တန်ဆောင်မုန်း ရဲ့ လ အရောင်..
နှင်း မှုန်မှုန်တွေ ကလဲ
အင်တိုက် အားတိုက် ပါပဲ
ခရမ်းရောင် ရင့်တဲ့ထိ ဖြိုက်ဖြိုက်ကျ လို့...
နတ်တော် ပြာသို ကူးအမီ
ပွင့်ဖို့ အားယူ ဖူးကြပြီ ...
အလွမ်းတွေ ချွေချွေ ချ..
(ဒင်း တို့ တတွေ.. )
ချစ်သူ့ ရင် အလွှာ.. ခြုံပ၀ါ ခြုံ ရတဲ့ ည
နှစ်လွှာ တစ်ရွက် တူစုံ ဖက်ရတဲ့ ည
ရောက် ကို ရောက်ရအုံး မှာ ကွဲ့...
ခေါင်းမော့ လို့ တေး...
အေး ထား နှင့် အုံး.. အေး ချင် သလောက် အေး ပါလေ့..
လမင်း ရေ.. လင်းချင်သလောက် လင်း ပါလေ့..
ရင်ငွေ့ အလှုံ ယုံကြည်ချက်ကလေး မပျက်သရွေ့ ..
ရင်ရိပ်အဝေး မှာပေမဲ့.. အားတင်း ခေါင်းမော့.. အလွမ်းတွေ ကိုချော့ ..
ဒီ ဆောင်းညကျော့ကွင်း မှာ .. ကျမ အမိ မခံတော့... .
Posted by မမသီရိ at 12/13/2010 06:43:00 PM
မင်း ကို ငါ မဖြားယောင်းခဲ့ဖူး..
အဲဒါ အချစ် သက်သက်..
မင်း လမ်း ကို မင်းလျှောက်တယ်
မင်း အပင်တွေ မင်း စိုက်တယ်..
မင်း တံ လျှပ် ကို မင်း လိုက်တယ်..
မင်း တံခါး ကို မင်း ပိတ်တယ်..
မင်း အခန်းမီး မင်း မှိတ်တယ်..
မင်း မွန်းကျပ်မှု မင်းလှောင်တယ်
မင်း အတ္တတွေ မင်းမွေး မြူတယ်..
မင်း ဆက်ထုံး တွေ အကြောင်း မင်း ဆွေးမြေ့တယ်..
မင်း ရိုးသားတဲ့ အကြောင်း မင်း အရောင်တင်ဖို့ ကြိုးစား တယ်..
ဒီလိုနဲ့ပဲ ငါ က မင်းကို မချစ်ရရိုး တဲ့လား...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ငါ က မင်းကို မလွမ်းရရိုး တဲ့လား...
မှတ် ထားလိုက်ပါ့ ကွဲ့ ...
ငါ (မင်း ကို) လွမ်း တယ်.... လွမ်း ရုံ သက်သက်..
ငါ (မင်း ကို) ချစ်တယ် .. ချစ် ရုံ သက်သက်..
ငါ (မင်း ကို) သတိရတယ်.. သတိရ ရုံ သက်သက်..
ဆူးတွေ ၀ှက်ထားသူ ကို လာလာ မနှဲ့ ပါနဲ့
နောင်တ.. မှာ အုပ်ထိမ်းသူ မဲ့ တယ်..............။
Posted by မမသီရိ at 12/06/2010 05:47:00 PM
မောင်... လို သလို ဆော့ နိုင် ရဲ့..
ကျမ က မောင့် ရဲ့ စွန်ကလေး ပါ..........။
Posted by မမသီရိ at 11/27/2010 12:16:00 PM
ကောင်းကင်က သူ့ အလိုလို ပြာတဲ့ဟာ
ရိုးမတောတွေ သူ့ အလိုလို ညို့နေတာ..
ပင်လယ်ကဗွီးတွေ သူ့အလိုလို တီးတိုး သီချင်း ငြီးနေတဲ့ဟာ..
နှင်းတွေ တအိအိ တဖွဲဖွဲ မှုန်နေတာ
ပိုပို သာသာ အမြဲလွမ်းနေမိတဲ့သူ...
အလွမ်းတေးသီတဲ့ ငှက်ကလေး မောလှပြီ.....။
Posted by မမသီရိ at 11/24/2010 06:08:00 PM
သင့်တင့်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်း.. ရှင်းရှင်းကြီးသိပါရဲ့..
အလျားအနံ မရှိသော်လည်း အသွားအပြန်ရှိတဲ့ မေတ္တာ..
သူကြင်မှ ကိုယ်ကြင်တဲ့ ချင်းစိမ်းနဲ့ မိတ်သလင်အကြောင်း..
သဒ္ဒါအလွန်.. တဏှာ ကျွံတော့ ဆင်းရဲရတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ သဘော..
ဟိုး.. စောစောထဲက.. ကောင်းကောင်းကြီး သိခဲ့တာပေါ့ ညီမလေးရယ်…
ပေါပေါများများ အလကားရလို့ သောက ၀ယ်တယ်ပဲဆိုဆို..
သူ့ကိုချစ်မိတဲ့ ခံစားချက်စွန်ကလေး..မမ လွှတ်ပေးမိပြီကွဲ့..
လျှော့ကြိုးတကုန်.. စကြာဝဠာ ကိုစုန်ချင်လဲစုန်ပါစေတော့..
စီးမျော သွားတဲ့ အလွမ်းတွေသာ.. သူ့ထံပါး အချိန်တိုင်းစေ…..
ချစ်မိလို့ ချစ်ခဲ့တဲ့ နောက်မှ.. ရပ်မရ တော့တဲ့ အချစ်တွေနဲ့
.. သူ့အပျော်.. သူ့သောက.. ကောက်ယူ မျိုမျို ချ..ရင်း
လေတိုးသံအကြား.. သူ့အသံလား မှတ်ဆဲ..
အိပ်မက်တွေထဲ.. သူ့ကို အမြဲထည့်မက်ဆဲ..
နေခြည်ဖြာ အဝေ့.. သူ့ကိုယ်ငွေ့ အဖြစ်မှတ်ဆဲ..
တမ်းတခြင်းမြစ်.. သူ့ကိုလွမ်းခြင်းနဲ့.. လျှံမြဲ..
အလွမ်းပင်လယ်.. သူ့ကိုချစ်ခြင်းနဲ့ အသက်ဝင်ဆဲ..
အဲဒီဥယာဉ်ကလေးမှာ.. သူ့ကို မြတ်နိုးခြင်း ပန်းများသာ ပွင့်ဆဲ..
အဲဒီတောင်တန်းတွေက .. သူ့အပေါ်ငြိတွယ်ခြင်းနဲ့… ပြာမြဲ..
မမ လေ.. ... ... ... ... သူ့ကိုပဲ ချစ်တယ်.. …..။
Posted by မမသီရိ at 11/01/2010 10:03:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုခဲ့သော အလံများ
Posted by မမသီရိ at 10/24/2010 05:19:00 PM
မင်းဆီမှာ ဆန်း နေတဲ့ လက
မိုးလေ ကင်းလွတ်တော့မဲ့ နှင်းအရိပ်တွေ ပုန်းလျှိုးကြည့်လာတဲ့ ဆောင်းကြိုရက်တွေမှာ…
ရွာနဲ့ဝေးတာကြာပေမဲ့.. အလွမ်းတွေက လတ်ဆတ်ဆဲပါ ဗွေး…
ရွာထိပ် သိမ်တော်ဝင်းထဲမှာ ထွန်းညှိချိတ်ဆွဲထားမဲ့ ရောင်စုံမီးပုံးတွေ..
ရွာလယ်ချောင်းကလေးမှာ.. မျှောကြမဲ့ ဖောင်ဆီမီးကလေးတွေ..
ယုန်နားရွက် မီးပုံးကလေးတွေနဲ့ စီတန်းခဲ့ကြတဲ့ ငါတို့ရဲ့ ငယ်ဘ၀တွေ..
လက်တွန်းမီးပုံးကလေးတွေ နဲ့ ရွာပတ်ခဲ့ကြတဲ့ ငါတို့ရဲ့ ငယ်ဘ၀တွေ…
အင်္ကျီ အသစ်တွေ ချုပ်ထားပြီလား ဗွေး..
ငါကြိုက်တဲ့ အပြာရောင်ပဲ နင် ၀ယ်မယ်ဆိုတာ ငါက သေချာနေပြန်သေးသကွဲ့..
ဟိုကောင် လူအေး က မိန်းမရပြီ လို့ ငါ ကြားရဲ့…
အပျိုကြီးဖားဖား မင်းအနား ..
ဘယ်အကောင်တွေများ ကပ်ပါးချောင်းမြောင်း နေမလဲ.. ငါမတွေးရဲ
ငါတို့ ရင်ချင်းအပ်ခွင့်. တနေ့ကတော့
ဘယ်ဆီ ဘယ်ဝယ်.. သေချာတယ်လားလို့ မမေးလာပါနဲ့အုံး ဗွေးရယ်…
အဲဒီ တခုသော ၀ါအကျွတ်… ငါတို့ ဆက်စောင့်ကြစို့ ရဲ့……
ငါ ရှိမနေနိုင်သေးတဲ့ ဒီဝါ အကျွတ်မှာ တော့.. ငါ့ ကိုလွမ်းရင်း နဲ့ ပျော်ပေါ့ကွယ်…………….။
Posted by မမသီရိ at 10/19/2010 07:58:00 PM
ဟိုက ဒီက ပို့ကြတယ် .... THIS IS wonderful..
ဟိုတနေ့က အာရှနိုင်ငံတခု မှာဆုံခဲ့မိတ်ဆွေမလေး တယောက်က မေးလ် တစ်စောင်ပို့လာတယ်.. ဖော်ဝါ့မေးလ် တွေဆိုတာ ဟိုကပို့ ဒီကပို့ နဲ့ သိသင့်တာလေးတွေ ဝေမျှချင်တာလေးတွေ ခံစားချက်တွေ ကို မိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာ မျှဝေကြတာမျိုးမဟုတ်လား..။ မဆန်းဘူး ဆိုပေမဲ့.. အကြိမ်ပေါင်း များစွာမှာတော့ အတော့်ကို အဓိပါယ်လေးနက်ပြည့်ဝပြီး ဘ၀ အတွက် ယူတတ်ရင် ရတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ခံစားမှုတွေကိုရစေပါတယ်... .. ဒီလို အကြောင်းအရာလေးတွေကို တချို့ဆို တကယ့်ကို အချိန်ယူပြီး တည်ဆောက်ထားကြတာမျိုးမို့ အံ့သြရတာလဲ မနည်းတော့... ရှာရှာဖွေဖွေ ကြံကြံဖန်ဖန်တွေ. .စေတနာတွေ.. စိတ်ကူးတွေ... ဖန်တီးမှုတွေ.. တကယ်တော့ အပြောကျယ်လှတဲ့ သတင်းနဲ့ နည်းပညာ သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ စိတ်ကူးအတွေးအခေါ်တွေကို စိတ်ရှိလက်ရှိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ကွန့်မြူး ထားကြတာတွေ မနည်းမနော ပါ...
ရံဖန်ရံခါ စိတ်ဓါတ်ကျနေတုန်း စိတ်အားတက်ကြွဖွယ် မေးလ်တွေ၊ စိတ်ကြည်နူးစရာလေးတွေ ဖတ်လိုက်ရရင် စိတ်အပြောင်းအလဲလေးတွေဖြစ်ပြီး စိတ်သက်သာရာရဖူးတဲ့ အကြိမ်တွေလဲများခဲ့ပါပြီ..။ စာဆိုရင် စာအုပ်ကလေးကိုင်ပြီး အိပ်ယာပေါ်လှဲဖတ်ရတဲ့အရသာကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်သေးပေမဲ့.. တနေ့ ပြီး တနေ့ အချိန်တွေ လုံးပါးပါး ပါးခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖန်သားပြင်ပေါ်က စာမျက်နှာတွေကိုသာ အချိန်လု ဖတ်ရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်လာနေပါတော့တယ်....
ဟိုနေ့က ရတဲ့ဖောဝါ့မေးလ်လေးဆို တကယ့်ဂန္တ၀င် .. အောင့်သက်သက် မျက်နှာပူပူနဲ့ ရီလိုက်ရတာ အူတွေ ကို နာတဲ့ထိ.. မြန်မာရာဇ၀င်ထဲမှာ ဆင်ဖြူပိုင်တဲ့မင်းတွေဟာ တန်ခိုးထွားတယ်.. ဆင်ဖြူရှိတဲ့နိုင်ငံက မိုးကောင်းပြီး ဆန်ရေစပါး ပေါကြွယ်တယ် ဆိုတာမို့လား.. ကျမတို့ဘကြီးတယောက် က ဆင်ဖြူတွေကို အင်မတန်မှ စွဲလမ်းတယ်လေ.. ငါးစီးရှင်ဖြစ်ဖို့ တစီးပဲ လိုတော့တာမို့.. .ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်သူ သကောင့်သားကလေးတယောက်က ဆင်ဖြူတကောင် လုပ်ပေးတာ.. မေးလ် အကြောင်းအရာက ဆင်ဖြူ နောက်တစီးရပြန်ပြီ.. ဆိုလို့.. စိတ်ဝင်တစား..နဲ့ တွဲထားတဲ့ပုံကလေး ကို အားတက်သရော ဖွင့်လိူက်တာ..
ဘာတွေ့တယ် ထင်သလဲ.... အသားဖြူလူမျိုး (ဘကြီးရဲ့ အမျိုးပေါက်ဖေါ်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်..း) ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ပါကလေးမှာ.. နားရွက်တပ်.. မျက်လုံးနှစ်လုံးတပ်ထားတာ..
ခုနက မိတ်ဆွေမလေး အကြောင်းဆက်ပြောရရင် သင်တန်းကာလ ၁ လလောက်မှာ ဆုံခဲ့တဲ့ လူ ၁၀၀ ကျော်လောက်ထဲမှာ သူမက ထူးထူးခြားခြားကလေး...။
ဆိုဟယ် ကဟယ် နဲ့ အမြဲပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတတ်တာ.. သူတင်ပျော်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူ့နံဘေးနားက လူတွေကိုပါ ဆွဲဆွဲ ခေါ် ပျော်တတ်တဲ့သူ.. တိုက်ကပ်နွယ်ပင်ကလေး လို့ အမည်ရတဲ့ သူမက ကိုယ့်အပေါ်မှာ လဲ အတော်ဖေးဖေမမ ရှိရှာတာပါ..။.. သူ့ဆီက ပဲ သူတိုနိုင်ငံရဲ့ စာမျက်နှာတွေမှာ မတွေ့ နိုင်တဲ့အတွင်းကျကျ ယဉ်ကျေးမှုတချို့ကို သိခွင့်ရခဲ့ရသလို.. မြန်မာလူမျိုးတွေလိုပဲ ပျော်စရာကို ရှာကြံပျော်တတ်တဲ့ ဓလေ့ စရိုက်လေးတွေကိုလဲ မြည်းစမ်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီ အမျိုးသမီးလေးက .. မကြာခဏ ဆိုသလိုကပဲ မေတ္တာ တရား နဲ့ နွေးထွေးခြင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ ဘ၀ နဲ့ နေပျော်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးလ်ကလေးတွေ ပို့ ပေးတတ်ပါတယ်..
ခုတလောမှာ.. အလုပ်တွေ အရမ်းများပြီး.. လူက စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေပုံ ရပါတယ်.. အရာတော် တော်များများကိုစိတ်တိုလွယ်နေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိထားမိတယ်.. ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းလွန်းသူတွေနဲ့ ကိုယ့်အဖေအရင်းနဲ့ ထပ်တူကောင်းလွန်းတဲ့ကိုယ့်အထက်အရာရှိကိုတောင် ကလန်ကဆန်ပြန်ပြောမိတဲ့ထိ ဖြစ်နေလို့အမြဲပဲ သတိထားနေရတဲ့အပြင်.. ဘာမဟုတ်တာလေးတွေကို ၀မ်းနည်းချင်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်ဖြစ် လာလို့ အားတင်းရတဲ့ ရက်တွေမှာ .. ဒီမေးလ်က ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး စာတွေ ဖတ်လိုက်ရတော့.. အတော်အတန် စိတ်သက်သာရသလိုတွေ့မိတာမို့.. ကိုယ့်ဘလော့လေး မှာ သိမ်းလိုက်ပါတယ်... .. ဓါတ်ပုံ ရဲ့ အောက်မှာ ပါတဲ့ စာတွေကတော့ မကြာခဏ မြင်ရဖတ်ရပေမဲ့.. ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး နောက် ခု တကြိမ်ပြန်ဖတ်တော့ အရသာက ပိုလေးနက်သလို တွေ့မိတယ်... ဓါတ်ပုံတွေကိုလဲ တကယ် နှစ်သက်မိတယ်..(အသက်ကြီးလာလို့ထင်ရဲ့ အသက်ကြီးကြီး ပုံတွေနဲ့ ကလေးပိစိ ပုံတွေ ပို နှစ်သက်လာသလိုလို..း).
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ဒီစာတွေကို မိတ်ဆွေမလေးဖတ်တတ်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့.. ကျေူးဇူးပါ Ivy ရေ...
Posted by မမသီရိ at 10/15/2010 06:52:00 PM